ဒူဒူကြီး: ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ Sea Trial (၁)
သဘေ်ာကျင်းတခုမှာ သဘေ်ာသစ်လွှဲပြောင်းလက်ခံမှု delivery protocol ကိစ္စအတွက်၊ ခရီးယာယီ သွားနေရသမို့၊ "ဒူဒူကြီးရဲ့ဘလောက်ဂ်" နဲ့ အဆက်အသွယ် ပြတ်နေရပါတယ်။ delivery protocol ကိစ္စသာမက statutory certificates ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအပြင်၊ ISM Codes နဲ့ ISPS Codes တွေအရ သဘေ်ာရဲ့ SMC လို့ခေါါတဲ့ safety management certificate နဲ့ ISSC လို့ခေါါတဲ့ international ship security certificate တွေရဖို့ internal audit မိမိကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ classification society ရဲ့ စစ်ဆေးမှုကို ခံယူခြင်း external audit ကိစ္စတွေကိုပါ လုပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ delivery protocol ကိစ္စနဲ့ ISM - international safety management/ ISPS - international ship and port security ကိစ္စတွေ အတွက်သာ၊ သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ သဘေ်ာစမ်းသတ်မောင်းနှင်ခြင်း sea trial အပိုင်းကို သဘေ်ာကျင်းမှာ ကြိုတင်ရောက်ရှိနေတဲ့ သက်ဆိုင်သူများမှ၊ ဆောင်ရွက်ပြီးထားပြီ၊ ဖြစ်သမို့ အသိအမှတ်ပြုခြင်း acknowledgement အနေနဲ့သာ၊ လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ရပါတယ်။
ခရီးထွက်ရာမှအပြန် (၂၀၀၈) ခုနှစ်လောက်တုန်းက၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဆူရာဗားယားမြို့မှ 'PT Dok Dan Perkapalan' ဆိုတဲ့ နိုင်ငံပိုင်သဘေ်ာကျင်းမှာ၊ သဘေ်ာဆောက်ပြီး၊ Sulu Sea ထဲအထိ sea trial ထွက်ခဲ့ဖူးတာလေးကို၊ အခြေခံကာ ရေးဖို့စိတ်ကူးမိတာနဲ့ ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ "Sea Trial" ဆိုပြီး၊ မှတ်မိသလောက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
sea trial ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို၊ sea trial condition, draft measurement နဲ့ test item for sea trail ဆိုပြီးခွဲခြားလေ့ရှိပါတယ်။ "test item for sea trail" မှာပါဝင်မယ့် အကြောင်းအရာတွေကတော့ starting test, dead ship condition test, adjustment of magnetic compass, stop inertia test, progressive speed trial, crash stop astern test, crash stop ahead test, anchoring test, turning test, Z maneuvering test, steering gear test, noise and vibration test, endurance trial, black out test, nautical instrument test, cargo and ballast test, life saving equipment test, structure tank test နဲ့ williamson turning test တို့ပါဝင်ပါတယ်။
test item for sea trail ဟာ SOLAS ဆိုတဲ့ Safety Of Life at Sea, COLRGE ဆိုတဲ့ Preventing Collisions at Sea, LL ဆိုတဲ့ Load Line နဲ့ MARPOL ဆိုတဲ့ Marine Pollution Prevention အစရှိတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူညီမှု conventions တွေအရ၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ regulations တွေနဲ့ ကိုက်ညီခြင်းရှိမရှိ၊ စမ်းသတ်အတည်ပြုခြင်းလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ sea trial မှာ သက်ဆိုင်ရာ classification society မှ attending surveyors တွေ၊ သဘေ်ာမှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်သူ maker ရဲ့ attending service engineers တွေသို့မဟုတ် attending commissioning engineers တွေ၊ သဘေ်ာတည်ဆောက်သူ ship builder ဖက်မှ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ သဘေ်ာရဲ့ attending superintendent တွေ လိုက်ပါစစ်ဆေးရပါတယ်။ သဘေ်ာကိုလက်ခံရယူမယ့် attending superintendent ဟာ IMO မှပြဌာန်းထားတဲ့ SOLAS, COLRGE, LL နဲ့ MARPOL regulations တွေကို၊ ထိရောက်စွာ နားလည်ထားဖို့လိုသလို၊ သဘေ်ာတည်ဆောက်သူ ship builder နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ သဘောတူညီမှု contract agreement ကိုလည်း၊ ထိရောက်စွာအသုံးချတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ်တွေ့တခုပြောရလျှင် (၅) ရက်ခရီး sea trial ရဲ့ (၂) ရက်မြောက်နေ့မှာ main engine နဲ့ပက်သက်တဲ့ 'progressive speed trial' ကို သဘေ်ာမကျလို့၊ လမ်းခရီးမှတင် ဆက်လက် စမ်းသတ်မှု မပြုစေတော့ပဲ၊ သဘေ်ာကျင်းသို့ ပြန်သွားစေခဲ့ဖူးပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက sea trail ထွက်စဉ်မှာ သဘေ်ာတစီးလုံး လူအယောက် (၇၀) ကျော်ပါ ပါတယ်။ radder နဲ့ gyro compass လို navigational equipment တွေ၊ PABX နဲ့ PA လို internal communication equipment တွေအတွက်၊ လိုက်ပါလာတဲ့ commissioning engineer တွေက၊ မိန်းခလေးတွေပါ။ purifier တွေ boiler တွေအတွက်လည်း၊ ထုတ်လုပ်သူ maker ရဲ့ attending commissioning engineers တွေ လိုက်ပါသလို၊ မှတ်မှတ်ရရ မိထ္ထီလာလေကြောင်းတက္ကသိုလ် 1st Intake မှ ညီ၊ အကိုတော်တဦးကလည်း၊ cargo & ballast tank level gauging system, ODME လို့ခေါါတဲ့ oil discharge monitoring equipment နဲ့ fixed combustible gas detection system တို့အတွက်၊ အမေရိကန်လူမျိုးတဦးနဲ့အတူ instrumentation ပိုင်းဆိုင်ရာ commissioning engineer အဖြစ်လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။ လူအယောက် (၇၀) ကျော်အတွက်၊ အိပ်စရာနေရာမရှိပေမယ့် attending superintendent ရဲ့ owner room ကို၊ မိန်းခလေးတွေကိုပေးလိုက်ပြီး၊ သဘေ်ာသားဟောင်းပီပီ engine control room မှ main switch board နောက်မှာနေရာ ဦးထားရပါတယ်။
"sea trial condition" ဆိုတာကတော့ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ 'test item for sea trail' မှာပါဝင်မယ့် အကြောင်းအရာတွေကို၊ full load နဲ့ ballast condition တွေမှာ၊ စမ်းသတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ "draft measurement" မှာတော့ သဘေ်ာဦး fore, သဘေ်ာဧရာ mid-ship, သဘေ်ာပဲ့ပိုင်း aft တို့မှ ရေစူး draft ကိုတိုင်းတာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနဲ့ specific gravity of sea water ဆိုတဲ့ ပင်လယ်ရေရဲ့ သိပ်သည်းဆတို့ကို၊ ကိုးကားမှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
(၁) - Starting test - "test item for sea trail" မှာပါဝင်မယ့် အကြောင်းအရာတွေထဲမှ 'starting test' ကနေစပါဦးမယ်။ 'starting test' ကို procedure နဲ့ items of measurement ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားသတ်မှတ် စမ်းသတ်ပါတယ်။ main air reservoir ဆိုတဲ့ ပင်မလေလှောင်အိုး main air vessel တွေဟာ၊ သဘေ်ာရဲ့ main engine မနှိုးခင် 30 Kg per sq. cm ဖိအား pressure ပမာဏအထိ၊ ဖြည့်သွင်းထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ လေလှောင်အိုး တလုံးတည်းကို အသုံးပြုပြီး main engine ကို (၃) ကြိမ်၊ auxiliary engine တွေဖြစ်တဲ့ generator engine တွေကို (၃) ကြိမ်နှိုးနှိင်စွမ်းရှိအောင်၊ သိုလှောင်နိုင်စွမ်း ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အထက်မှာဖော်ပြတဲ့ အချက်အလက်တွေဟာ single screw လို့ခေါါတဲ့ main engine တလုံးတည်းကို၊ အသုံးပြု တည်ဆောက်ထားတဲ့ သဘေ်ာတွေအပေါါ အခြေခံထားတာဖြစ်ပြီး၊ auxiliary engine တွေဖြစ်တဲ့ generator engine တွေဟာလည်း၊ လေအား compressed air ကိုအသုံးပြုကာ၊ စတင် နှိုးစေမယ့် engine တွေကို၊ အသုံးပြု တည်ဆောက်ထားတဲ့ သဘေ်ာတွေအပေါါ အခြေခံထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သဘေ်ာဟာ single screw မဟုတ်ပဲ main engine (၂) လုံး၊ တတ်ဆင်ထားတဲ့ twin screw သဘေ်ာ ဖြစ်ခဲ့လျှင်လည်း လေလှောင်အိုး တလုံးတည်းကို အသုံးပြုပြီး main engine (၂) လုံးစလုံးကို (၃) ကြိမ် နှိုးနှိင်စွမ်း starting ရှိရန်၊ လိုအပ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် compressed air system တခုလုံးကို စမ်းသတ်စစ်ဆေးခြင်းလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ items of measurement မှာ total number of starting test ဆိုတဲ့ လေအားကို အသုံးပြုကာ main engine နဲ့ auxiliary engine တွေကိုနှိုးတဲ့ အကြိမ်အရည်အတွက်၊ main engine နဲ့ auxiliary engine တွေရဲ့ မနှိုးခင်အခြေအနေမှ lubricating oil ရဲ့ temperature နဲ့ မနှိုးခင်အခြေအနေမှ engine room ရဲ့ temperature တို့ကို၊ ကိုးကားမှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါတယ်။
(၂) - Dead ship condition test - သဘေ်ာတစီးလုံးမှာရှိတဲ့ auxiliary engine တွေဖြစ်တဲ့ generator engine တွေကို၊ မောင်းနှင်လည်ပတ် မှုရပ်တန့်ထားခြင်း တနည်းအားဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား power supply ပြတ်တောက်နေတဲ့အခြေအနေမှာ၊ အချိန်နာရီဝက် မိနစ် (၃၀) အတွင်း main engine ကို နှိုးခြင်းဖြင့် စမ်းသတ်ပါတယ်။ main air reservoir ဆိုတဲ့ ပင်မလေလှောင်အိုး main air vessel တွေကို empty condition အနေနဲ့ လေဖြည့်သွင်းသိုလှောင်ထားခြင်းမရှိစေပဲ၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပြတ်တောက်နေတဲ့အခြေအနေမှာ၊ automatic starting of stand by generator to be 'OFF' အနေနဲ့ အလိုအလျှောက် စတင်မလည်ပတ်စေရန်၊ emergency generator ကိုလည်းဆောင်ရွက်ထားရန် လိုပါတယ်။ operator ဟာ engine control room မှ emergency generator room သို့သွားပြီး၊ emergency generator ကို manually start အနေနဲ့ သွားရောက်မောင်းနှင်ရပါတယ်။ emergency generator လည်ပတ်ပြီးတာနဲ့ ပင်မလေလှောင်အိုး (၂) လုံးအနက် (၁) လုံးကို လေဖြည့်ပြီး၊ main engine ကို နှိုးခြင်းဖြင့် 'dead ship condition test' ကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်။ dead ship condition မှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား power supply ပြတ်တောက်နေတဲ့အခြေအနေမှ၊ main engine ကို စတင်နှိုးနိုင်တဲ့ အခြေအနေအထိ၊ ကြာမြင့်ချိန်ကို၊ ကိုးကားမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
(၃) - Adjustment of magnetic compass - သဘေ်ာတည်ဆောက်စဉ် main deck မှာပြုလုပ်တဲ့ hot work လို့ခေါါတဲ့ electric welding လျှပ်စစ်ဂဟေဆော်ခြင်းတွေကြောင့်၊ ပေါါထွက်လာတဲ့ လျှပ်စစ် သံလိုက်စက်ကွင်း electro-magnetic wave တွေဟာ၊ သဘေ်ာရဲ့ wheel house အထက်၊ monkey island မှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ magnetic compass ရဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်း magnetic wave တွေကို၊ ထိခိုက်စေတတ်ပါတယ်။ သဘေ်ာတည်ဆောက်ရာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ရေကြောင်းအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း marine administration သို့မဟုတ် port authority အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ 'compass adjuster' ပညာရှင်မှ၊ သဘေ်ာ sea trial မထွက်ခင် magnetic compass ပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်းကို၊ ဆောင်ရွက်ထားရန် လိုအပ်ပါတယ်။
'monkey island' ဆိုလို့ပြောရပါဦးမယ်။ ညီလိုခင်ရတဲ့ ရေယာဉ်မှုး ကပ္ပတိန်လမင်းဦး ကတော့၊ ရေကြောင်းပညာရပ် အသုံးအနှုံး၊ ဝေါဟာရတွေ သီးသီးသန့်သန့် ကိုးလို့ကန့်လန့် ဖြစ်နေတာဟာ၊ ဥရောပက ဂုရုကြီးတွေရဲ့ ဝီစကီမူးမူးနဲ့ ပယောဂပါပဲလို့ပြောဖူးပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကပ္ပတိန်လမင်းဦးရဲ့ "Seamanshit ( မျောက်ကျွန်း၊ မင်းဂွတ်သီး၊ ငယ်ထိပ် နှင့် ၅၂၈၀ ပေ )" ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးကို၊ ပြန်လည် ကိုးကားပါရစေ။
အခြေခံကစလို့ ပြောရလျှင်၊ သင်္ဘောရဲ့ ဘယ်ဖက်နဲ့ ညာဖက်ကို left နဲ right လို့ ရှင်းရှင်းမလုပ်ဘဲ၊ သင်္ဘော ညာဖက်က ပန်ကာတပ်ထားလို့ 'starboard'၊ သင်္ဘော ဘယ်ဖက်က ဆိပ်ကမ်းကပ်ရင် သုံးလို့'port' ဆိုပြီး ထွင်ပါတယ်။ တချိန်တုန်းကသင်္ဘောတွေမှာ၊ သင်္ဘောညာဖက်ခြမ်းမှာပဲ၊ တက်မ ပန်ကာကို တတ်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ညာဖက်ခြမ်းမှာ ပန်ကာထားထားတော့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းဟာ ဆိပ်ကမ်းကပ်ဖို့ ပိုလွယ်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခုခေါါတ်မှာတော့ ကမ်းကပ်တဲ့အခါ၊ ဘယ်ရော ညာရော၊ အဆင်ပြေသလို ကပ်ကြပါတယ်။
သင်္ဘောတည်ဆောက်ရာမှာသုံးတဲ့၊ သံပြားတွေကိုလည်း၊ အသုံးပြုတဲ့ နေရာကို လိုက်ပြီး၊ keel plate, coffin plate, shoe plate, margin plate, fashion plate, breast hook, carling plate, wash plate, gusset plate, garboard strake, sheer strake, boss plate.. စသဖြင့်ခေါါကြသလို၊ စာရင်းပြုစုကြည့်လျှင်၊ အမည်ပေါင်း ရာကျော်ရှိပါလိမ့်မယ်။
သင်္ဘောပေါ်မှာလူနေတဲ့ အဆောက်အအုံကို၊ 'accommodation' လို့ခေါါပြီး၊ သင်္ဘောမောင်းနှင် ထိန်းချုပ်တဲ့နေရာ steering and maneuvering control station ကိုတော့ 'bridge' လို့ခေါါပါတယ်။ ဆရာမြသန်းတင့် ကတော့ F. Tennyson Jesse ရဲ့ The Lacquer Lady ဆိုတဲ့ဝထ္ထုကို "ချစ်သောယွန်းခင်ခင်" ဆိုပြီး၊ ဘာသာပြန်ရာမှာ S. S Bengal ဆိုတဲ့ steam engine သုံး 'ဘဂ်လား' ဆိုတဲ့ ခရီးသည်တင် သဘေ်ာမှ bridge ကို 'ရေကြောင်းပြတံတား' အဖြစ်၊ ဝေါဟာရဖလှယ်ဖူးပါတယ်။ mess ဆိုတာကတော့ အမှိုက်၊ ပြသနာလို့အဓိပ္ပါယ်ရပေမယ့် သင်္ဘောပေါ်မှာတော့ 'mess room' ဟာ၊ စားသောက်ခန်း dining room လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
သဘေ်ာပေါါ အတက်အဆင်းလုပ်တဲ့လှေကား accommodation ladder ကိုတော့ 'gangway' လို့ခေါါပါတယ်။ သင်္ဘောသားတွေ အတက်အဆင်း လုပ်တာထက်၊ ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားအဖွဲ့ stevedore gangs တွေ အတက်အဆင်းလုပ်တာ၊ ပိုများလို့ထင်ပါတယ်။ သဘေ်ာတခေါက်လိုက်ပြီး အပြန်၊ ငယ်ကဦးတဲ့ 'စပါယ်ဖူး' နဲ့ ရန်ကုန်မှာပြန်ဆုံတော့ ဘယ်က ဘယ်လိုသဘေ်ာပေါါ တက်သွားတာလည်းလို့၊ မေးတဲ့အခါ 'gangway' ကနေ တက်သွားတာပေါ့လို့ ပြန်ဖြေခဲ့ဖူးပါတယ်။ gangway ဟာ သဘေ်ာတင်ပေးတဲ့ 'agent' ရယ်လို့၊ စပါယ်ဖူးက အထင်နဲ့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သလို၊ ဒီနေ့အထိလည်း၊ စပါယ်ဖူးပြောခဲ့တဲ့ agent အဲလေ ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားအဖွဲ့ stevedore gangs တွေ၊ သဘေ်ာ အတက်အဆင်းလုပ်တဲ့ gangway တလှည့် pilot ladder လို့ခေါါတဲ့ ရေကြောင်းပြ အရာရှိတွေ သဘေ်ာအတက်အဆင်းလုပ်တဲ့၊ ကြိုးလှေကားတလှည့် သုံးကာ၊ သဘေ်ာတွေအပေါါ အတက်အဆင်း လုပ်နေရဆဲပါ။
ကုန်စည်တွေထားသိုတဲ့ နေရာကို cargo hold လို့ခေါ်ပေမယ့် cargo hold ရဲ့ 'အဝ' ကိုကျတော့ cargo hold access သို့မဟုတ် cargo hold entrance လို့မခေါါပဲ 'hatch' လို့ခေါါပါတယ်။ အဘိဓာန် dictionary ထဲမှာတော့ hatch ကို 'to break open so thatayoung bird, fish, insect' လို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါတယ်။ အသုံးအဖြုန်းကြီးတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ ရည်းစားဖြစ်နေခဲ့လျှင်၊ သဘေ်ာသားအခြင်းခြင်း cargo hold ဆိုတဲ့ 'ကုန်ပေါက်' ထဲပြုတ်ကျလိမ့်မယ်လို့ သတိပေးလေ့ရှိပါတယ်။ cargo hold ထဲကို လူဆင်းတဲ့ အပေါက် man hole ကိုတော့ 'booby hatch' လို့ အမည်သညာပေးပါတယ်။ booby hatch ဆိုတာမူရင်း 'boob' ဆိုတဲ့ဝေါဟာမှ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ရေပြင်ညီပြောင်ရှင်းနေတဲ့ ပင်မကုန်းပတ် main deck ပေါ်မှ၊ ထိုးထိုးထောင်ထောင်ထွက်နေတဲ့ အပေါက်ကလေး ဆိုပါတော့။ လှိုင်းလေကြီးလို့ ကုန်းပတ်ပေါါ၊ ပင်လယ်ရေတက်လာလျှင် သူ့အပေါါမှ၊ ပင်လယ်ရေကျော်ဖြတ်မသွားနိုင်အောင် တနည်းအားဖြင့် ကုန်ပေါက်ထဲကို ရေမဝင်အောင်၊ ကုန်းပတ် level ကနေ၊ မီတာဝက်လောက် မြှင့်ပြီး အပေါက်ဖောက်ကာ၊ အဖုံးတပ်ထားတဲ့ လူတစ်ယောက် ဝင်သာရုံ အပေါက်ကလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
poop deck ဆိုတာကတော့၊ 'poop' ဆိုတဲ့ ဝေါဟာမှ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အညစ်အကြေးစွန့်ရာ ကုန်းပတ်နေရာ၊ လို့အဓိပ္ပါယ်မဖွင့်ဆိုပဲ၊ သင်္ဘောရဲ့ နောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ အားဖြည့်ဖရိန်နံရံ after most bulkhead ရဲ့ နောက်မှာရှိပြီး၊ after most bulkhead မှ ထောက်ပံ့အားကူ ပေးထားတဲ့၊ ကုန်းပတ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါတယ်။
သင်္ဘောရဲ့ အထက်အောက် up and down ထောင်လိုက်အားဖြည့် နံရိုးတွေကို frame လို့ခေါါပြီး၊ ပင့်ကူအိမ်လို ရှုပ်နေလို့ 'webbed frames' အဖြစ်အမည်သညာပေးပါတယ်။ ရှေ့နောက် fore and aft အားဖြည့်နံရိုးတွေကိုတော့ longitudinal လို့ခေါါကာ၊ longitudinal frames တွေမှာ၊ အပေါက်ဖောက်ပေးထားတာ ကိုတော့ 'washing plate' လို့ခေါါပါတယ်။ ကန့်လန့် left to right သို့မဟုတ် port to starboard ရှိနေတဲ့နံရိုး frame တွေကို 'beam' လို့ခေါါသလို၊ သင်္ဘောအောက်ခြေသံပြား ship bottom plates အပေါါကန့်လန့်ထောင်ကာ၊ အပေါက်ဖောက်ထားတဲ့ နံရိုး frame တွေကို 'girder' လို့ခေါါပါတယ်။ လှိုင်းဒဏ်လေဒဏ်၊ ခံနိုင်အောင်တည်ဆောက်ထားတဲ့ သင်္ဘောရှေ့ဆုံးမှ ကန့်လန့်နံရိုး frames တွေကို 'panting beams' လို့ခေါ်ပါတယ်။
ထောင့်တွေမှာ ချုပ်ထားတဲ့၊ တြိဂံပုံစံ သံပြားတွေကိုတော့ နေရာအလိုက် အမည်သညာ အမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။ ကုန်းပတ်ပေါ်မှ နံရိုးအသေး frames လေးတွေကိုချုပ်ထားတဲ့ တြိဂံပုံစံ သံပြားတွေကို 'stiffener' လို့ခေါါသလို၊ 'gusset plate' လို့လည်းခေါါပါတယ်။ သဘေ်ာဦး ship bow မှ၊ ဘယ်ညာ သံပြားနှစ်ခုအဆက်ကို၊ ချုပ်ထားတဲ့ တြိဂံပုံစံသံပြားကို ရင်စေ့ 'breast hook' လို့ခေါါပြီး၊ ကုန်းပတ် decks တွေအာက်မှ၊ ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ တြိဂံပုံစံ သံပြားတွေကိုတော့ ဒူးထောက်ပြီး ပင့်တင်ပေးထားတဲ့ 'beam knee' လို့ခေါါပါတယ်။
Fig. Dutchman's Log
သင်္ဘောစပြီး ဆောက်တဲ့အခါ၊ ပထမဆုံး အူတိုင် ရှေ့နောက် fore & aft ကိုယ်ထည်သံပြားကို 'keel' လို့ခေါ်ပါတယ်။ အူတိုင်ရဲ့ ရှေ့ဆုံး bow/ forward က သံပြားလေးကို ဖိနပ်ထိပ်လေးနဲ့တူလို့ 'shoe plate' လို့ခေါါပြီး၊ အူတိုင်ရဲ့နောက်ဆုံး aftermost/ stern သံပြားလေးကိုတော့ 'coffin plate' လို့ခေါ်ပါတယ်။ တခါ သင်္ဘောကိုယ်ထည် hull တည်ဆောက်ရာ၊ သံပြားနှစ်ပြားဆက်သုံးရမယ့်နေရာမှာ၊ တပြားတည်း အဆက် joint မရှိပဲ သုံးထားလျှင် 'stealer plate' လို့ခေါါပါတယ်။ အူတိုင်နဲ့ ကပ်လျက်အပြိုင်၊ ရှေ့နောက် fore and aft ကိုယ်ထည် hull သံပြားကိုတော့ 'garboard strake' လို့ခေါါပြီး၊ 'ချက်ပြီးပြုတ်ပြီးသား' ဆိုတဲ့ Dutch ဝေါဟာရမှ ဆင်းသက်လာတာဖြစ်သလို၊ အသားကျပြီးသားသံပြားလို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ speed log တွေ GPS တွေမပေါါခင် (၁၆) ရာစု လောက်က၊ သင်္ဘောရဲ့ တကယ်ရသောအရှိန် 'speed made good – ship actual speed after compensating wind and water effect' ကိုတိုင်းတာတဲ့ ကရိယာလေးကိုလည်း၊ 'Dutchman’s Log' လို့ခေါါကြပါတယ်။
ကျောက် anchor 'မ' တဲ့အခါ having up anchor မှာ၊ ကျောက်ကြိုး anchor chain ဝင်သွားတဲ့အခန်းကို၊ 'chain locker' လို့ခေါ်ပြီး၊ ကျောက်ကြိုးရဲ့ အတွင်းစ အဆုံးမှာ 'hurricane pin' ဆိုတဲ့ သွားကြားထိုးတံ အကြီးစားကြီးနဲ့ သင်္ဘောမှာ တွဲချည်ထားပါတယ်။ hurricane pin ထိုးထားတဲ့ နေရာကို၊ ဆိုးရွားသောအဆုံးသတ် 'bitter end' လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ ကျောက်ကြိုး anchor chain ရစ်တဲ့ windlass ရဲ့ ရစ်လုံး winch drum ပေါ်မှာ၊ ကျောက်ကြိုးကို ဖမ်းတဲ့ “ခွက်” ပုံစံလေးတွေရှိပြီး၊ 'gypsy' လို့ခေါါပါတယ်။ ဘယ်ကျောက်ကြိုး ကွင်းဆက်လေးတစ်ခုကိုမှ သူနဲ့အတူ သစ္စာရှိရှိ၊ သိမ်းမထားပဲ၊ တွေ့ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း ခွဲခွာသွားတယ် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ နာမည်ပေးထားတာ ဖြစ်သလို၊ ကျောက်ကြိုး ကွင်းဆက်လေးတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု၊ ဖမ်းကုပ်ထားပြီး chain locker ထဲကို ပစ်ချကာ၊ နေရာ အတည်တကျမရှိ အမြဲတမ်း ရွေ့လျားနေတဲ့ ခွက်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ဘောသား အသစ်မနူးမနပ်လေးတွေကို၊ သင်္ဘောပေါ်မတက်ခင် ခြင်ထောင်၊ စောင်ယူသွားခိုင်းတာတို့၊ သင်္ဘောပေါ်ရောက်ရင် bosun chair ဆိုတဲ့ သင်္ဘောသားခေါင်းထိုင်ခုံပေါါ၊ ထိုင်ခိုင်းတာတို့နဲ့ 'စ' လေ့ ရှိပါတယ်။ လှိုင်းထဲလေထဲ ရွက်တိုင် 'mast' တွေအပေါါနဲ့ အမြင့်တွေမှာ၊ သံချေးခေါက်ခြင်း chipping၊ ဆေးသုတ်ခြင်း painting နဲ့ ချောဆီထိုးခြင်း greasing တို့အတွက်၊ ကြိုးနှစ်ချောင်းဆိုင်းထားတဲ့ သစ်သားပြား ခုံကလေးကို အသုံးပြုရပြီး 'bosun chair' လို့ခေါါပါတယ်။ ထင်းချောင်းအရွယ် သစ်သားစတွေကို ကြိုးနဲ့ဆက်ထားပြီး၊ နေရာတကာ သယ်လို့လွယ်တဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကြိုးလှေကားလေးကိုတော့ 'jacob ladder' သို့မဟုတ် 'monkey ladder' လို့ခေါါပါတယ်။ လူနေခန်းတွေက ပြူတင်းပေါက်တွေကို 'porthole' လို့ခေါါကာ၊ သံနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ တံခါးရွက်တွေကိုတော့ 'deadlight' လို့ခေါါပါတယ်။ သင်္ဘောရဲ့ အမြင့်ဆုံးရွက်တိုင် 'main mast' ဟာ၊ bridge ရဲ့ အပေါ်မှာရှိပြီး၊ 'Christmas tree' လို့ခေါါပါတယ်။ Christmas tree ရှိတဲ့ အမြင့်ဆုံးကုန်းပတ် ကတော့ မျောက်ကျွန်း 'monkey island' ဆိုပြီး၊ အမည်သညာပေးပါတယ်။
အထက်တနေရာမှာ classification society မှ attending surveyors တွေပါ၊ 'sea trial' မှာလိုက်ပါ ရကြောင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။ attending surveyors တွေလိုက်ပါစီးနင်းရခြင်းဟာ၊ SOLAS, COLREG, LL နဲ့ MARPOL ဆိုတဲ့ regulations တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၊ စစ်ဆေးပေးခြင်းဖြစ်ပြီး၊ satisfactory အနေနဲ့ လက်ခံနိုင်တဲ့အခါ၊ 'classification and statutory' ဆိုင်ရာ သက်သေခံလက်မှတ်တွေကို၊ အတည်ပြုကာ ထုတ်ပေးပါတယ်။ တည်ဆောက်ထားတဲ့ သဘေ်ာရဲ့ drawings တွေနဲ့ construction plans တွေကို၊ စစ်ဆေးကာအတည်ပြုပေးခြင်း၊ တည်ဆောက်နေစဉ် construction process ကာလတလျှောက်လုံး၊ သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားတဲ့ defined standards တွေကို၊ တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပေးခြင်းနဲ့ တည်ဆောက်ရာမှာ အသုံးပြုမယ့် materials အမျိုးအစားတွေနဲ့ တည်ဆောက်ရာမှာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေသူ involved persons တွေရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု skill အရည်အသွေးတို့ကို၊ စစ်ဆေးကာ အတည်ပြုပေးခြင်းတို့ ဖြစ်ပြီး၊ hull and machinery class certificate လို့ခေါါပါတယ်။
'statutory' ဆိုင်ရာ သက်သေခံလက်မှတ်တွေကတော့၊ SE ဆိုတဲ့ safety equipment, SR ဆိုတဲ့ safety radio, SC ဆိုတဲ့ safety construction, LL ဆိုတဲ့ load line, IOPP ဆိုတဲ့ oil pollution prevention, IAPP ဆိုတဲ့ air pollution prevention နဲ့ ISPP ဆိုတဲ့ sewage pollution prevention certificate တို့ဖြစ်ပြီး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်းအဖွဲ့မှ၊ သဘောတူညီမှု international conventions တွေအရ ပြဌာန်းထားတဲ့၊ International Convention for the Safety of life at Sea (SOLAS) 1974 with its Protocols as amended, International Convention of Load lines (LLC) 1966, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 1973 with its Protocol, International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping of Seafarers (STCW) 1972/ 1995, Convention of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) 1972, Merchant Shipping (Minimum Standards ) Convention 1976 (ILO Convention Nr. 147) နဲ့ International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention (ISM Code/ SOLAS Ch. IX) တို့အပေါါမှာ၊ အခြေခံထားတဲ့ regulations တွေအရ၊ ကိုက်ညီကြောင်း အသိအမှတ်ပြုကာ၊ အတည်ပြုပေးတဲ့ certificates တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
'sea trial' အပြီး၊ classification society မှအတည်ပြုကာထုတ်ပေးတဲ့ 'classification and statutory' ဆိုင်ရာ သက်သေခံလက်မှတ်တွေဟာ၊ interim certificate ဆိုတဲ့ (၃) လသက်တမ်းရှိ၊ ယာယီ သက်သေခံ လက်မှတ်တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ interim certificate ဆိုတဲ့ (၃) လသက်တမ်းရှိ၊ ယာယီ သက်သေခံ လက်မှတ်တွေကို ရရှိလာတဲ့အခါ၊ သဘေ်ာတည်ဆောက်ပေးရန်အလုပ်အပ်နှံသူ သဘေ်ာပိုင်ရှင် ship's owner အနေနဲ့၊ မိမိနှစ်သက်ရာ တိုင်းပြည်တခုခုမှာ မှတ်ပုံတင်ခြင်း registration ကို၊ စတင်လျှောက်ထားလို့ ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် port of registry ဆိုတဲ့ မိမိနှစ်သက်ရာ တိုင်းပြည်ရဲ့ national administration သို့မဟုတ် authority လို့ခေါါတဲ့ အာဏာပိုင် flag state အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ၊ registration အဖြစ်၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သဘေ်ာကို port of registry ဆိုတဲ့ မိမိနှစ်သက်ရာ တိုင်းပြည်ရဲ့ national administration သို့မဟုတ် authority လို့ခေါါတဲ့ အာဏာပိုင် flag state အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ၊ registration အဖြစ်၊ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ရပေမယ့်၊ building commercial matters ဆိုတဲ့၊ တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စတွေကြောင့် သဘေ်ာကို ship builder ဆိုတဲ့ သဘေ်ာတည်ဆောက်ပေးသူမှသာ၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ သဘေ်ာ တည်ဆောက်ပေးသူဟာ၊ သဘေ်ာတည်ဆောက်ပေးရန်အလုပ်အပ်နှံသူ သဘေ်ာပိုင်ရှင် ship's owner နဲ့ သဘေ်ာတည်ဆောက်ပေးသူ ship builder ကြားမှာ၊ ဥပဒေကြောင်းအရ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမယ့် တဆင့်ခံ ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့ ပွဲစား broker အဖွဲ့အစည်းတခုခုဖြစ်နိုင်သလို၊ အာမခံအဖွဲ့အစည်းတခုခု ဒါမှမဟုတ်၊ သဘေ်ာကိုတိုက်ရိုက် တည်ဆောက်ပေးသူ ship builder ဆိုတဲ့၊ သဘေ်ာကျင်း ship yard လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မမျှော်လင့်ထားတဲ့၊ တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စတွေမှာ အခက်အခဲတွေပေါါပေါက်လာတဲ့အခါ၊ သဘေ်ာတည်ဆောက်ပေးရန်အလုပ်အပ်နှံသူ သဘေ်ာပိုင်ရှင် ship's owner နဲ့ သဘေ်ာတည်ဆောက်ပေးသူ ship builder ကြားမှာ၊ ဥပဒေကြောင်းအရ ရှင်းစရာတွေ ဖြစ်လာတတ်သလို၊ သဘေ်ာတည်ဆောက်ပေးရန် အလုပ်အပ်နှံသူ သဘေ်ာပိုင်ရှင် ship's owner ဟာ၊ invisible အနေနဲ့ကိုယ်ယောင်ဖျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ သဘေ်ာပိုင်ရှင် ship's owner နဲ့ သဘေ်ာတည်ဆောက်ပေးသူ ship builder ကြားမှာ၊ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမယ့် တဆင့်ခံ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစည်းတခုခု ဒါမှမဟုတ် သဘေ်ာကိုတိုက်ရိုက် တည်ဆောက်ပေးသူ ship builder ဆိုတဲ့၊ သဘေ်ာကျင်း ship yard မှာတည်ဆောက်ပြီးသားသဘေ်ာဟာ၊ လက်ခံရယူမယ့်သူ မရှိပဲ၊ ကျန်နေတတ်ပါတယ်။
Reference : SOLAS, 2012 edition, Dutchman's Log, M.T Vanda / N. 06599, PMS 2228 - 6/ BV 09723 V Sea Trial Record, 12th November, 2008. PT Dok Dan Perkapalan, Surabaya (PERSORO), ကပ္ပတိန်လမင်းဦးရဲ့ "Seamanshit ( မျောက်ကျွန်း၊ မင်းဂွတ်သီး၊ ငယ်ထိပ် နှင့် ၅၂၈၀ ပေ )", ဆရာမြသန်းတင့်ရဲ့ "ချစ်သောယွန်းခင်ခင်"၊ ဒုတိယအကြိမ် ပုံနှိပ်ခြင်း၊ မေလ၊ (၂၀၀၂) ခုနှစ်၊ Quality Publishing House, (၇၅) အုပ်မြောက်အထူးအစီအစဉ်။
Posted by ကိုထွန်း at 00:35